Anyị na-egosi gị otu esi etinye Lenovo Launcher na ngwa ọdịnala ya | Gam akporosis
Kedu ka anyị si mara na ọtụtụ ndị ọrụ gam akporo chọrọ ịnwale ngwa na Launchers nke ụdị ndị ọzọ na ụdị nke Smartphones, taa m wetara gị. Lenovo Launcher na ngwa ọdịnala ya niile iji wụnye ọ bụla gam akporo na-enweghị mkpa mgbọrọgwụ.
Dị ka anyị mere ihe atụ na Alcatel OneTouch nkwụnye, El Google Pixel launcher ma ọ bụ ọtụtụ ndị ọzọ, taa, anyị na-ewetara gị nkuzi vidiyo a dị mfe nke anyị ga-akụziri gị otu esi etinye Lenovo Launcher na ngwa ọdịnala ya niile. ọma, niile nwa afọ ngwa abụghị kpamkpam ezi ma ebe e nwere ọtụtụ n'ime ha na-ejedebeghị na naanị nbudata na na na wụnye na Lenovo-ika ọnụ. Ihe doro anya ma ọ bụ eziokwu bụ na anyị ga-enwe ike ịwụnye ihe bụ isi ngwa Lenovo dị ka Launcher, ngwa igwefoto yana ụfọdụ adịghị ike, ngwa Lenovo Gallery, ihe ndekọ ụda, elekere nke Lenovo yana wijetị ihu igwe ya yana elekere ma ọ bụ ọbụna vidiyo vidiyo. Egosiri m gị ihe a niile na vidiyo ejikọtara nke anyị ji bido ọkwa a yana ị ga - ahụ njikọ maka nbudata ngwa ngwa nke ngwa dị mkpa naanị site na ịpị «Nọgidenụ na-agụ nke a post».
1 Budata Lenovo Launcher na ngwa ọdịnala ya niile
2 Ma olee otu m ga esi esi wunye ngwa Lenovo na gam akporo m?
3 Usoro nwụnye nke Lenovo Launcher na ngwa ya
Budata Lenovo Launcher na ngwa ọdịnala ya niile
Ihe mbụ anyị ga-eme bụ budata ngwa ndị dị mkpa maka nwụnye site na Lenovo Launcher yana igwefoto, gallery, elekere, wijetị elekere, ihe ndekọ ederede na ọbụna vidiyo vidiyo.
Budata Lenovo Launcher
Budata igwefoto Lenovo
Budata Lenovo Photo Gallery
Budata Lenovo Clock Wijetị
Budata Lenovo Elekere.
Budata Lenovo Sound Recorder
Budata vidiyo vidiyo Lenovo
Ma olee otu m ga esi esi wunye ngwa Lenovo na gam akporo m?
Iji wụnye Ihe nkwụnye Lenovo ị na-aga na-na a version nke Android 4.4 ma ọ bụ karịa ruo njedebe nke gam akporo 6.0 ebe ọ bụ na Nougat ma ọ bụ gam akporo 7.0 ọ na-enye nsogbu ma ọ bụ ọbụnadị na arụnyere.
Maka igwefoto ị ga-anọrịrị na nsụgharị nke Android 4.0 ruo Marshmallow. Maka ngwa foto foto ị ga-adị na nsụgharị nke Android 5.0 ma ọ bụ gam akporo Marshmallow. Maka wijetị elekere na ngwa elekere Lenovo ị ga-anọrịrị na nsụgharị sitere na gam akporo 4.2 na gam akporo M. n'uche tupu ị kwuo na otu n'ime ngwa ndị a akọrọ ebe a enweghị ike itinye ya na gam akporo gị.
Usoro nwụnye nke Lenovo Launcher na ngwa ya
Ozugbo ebudatara ngwa ngwa niile dị mkpa nwụnye nke Lenovo Launcher na ngwa ọdịnala ya niile, tupu ị ga-aga ntọala gị gam akporo na site na nhọrọ nke Nche, mee ka igbe ga-enyere gị aka ịwụnye ngwa na mpụga Storelọ Ahịa Play, nhọrọ a na-akpọ Amaghị mmalite ma ọ bụ ebe a na-amaghị ama.
Ozugbo emere nke a ihe ị ga - eme bụ pịa na ngwa ọ bụla ebudatara, Na-agagharị na ihe nchọgharị faịlụ gam akporo gị na ụzọ ndabara faịlụ ndabara nke na-abụghị onye ọzọ karịa folda Downloads ma ọ bụ folda Budata site na ntaneetị.
Na nke a ka m ugbua ihe ngwungwu ngwugwu gam akporo ga-apụta ịjụ anyị maka ikike iji wụnye ngwa ọ bụla ebudatara. Mgbe ahụ naanị site na ịpị Home bọtịnụ a ga-enye gị ohere ịtọ Lenovo Launcher na ndabara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » [APK] Anyị na-egosi gị otu esi etinye Lenovo Launcher na ngwa ọdịnala ya niile
Gịnị ma ọ bụrụ na m na-achọ onye nnabata?
Zaghachi Maria Del Rosario Lopez Ochoa
Ọ dị mma, ị wụnye Launcher na ọ bụ ya
Carlos Frias ebe obibi oyiyi dijo
Kedu rom ịwụnyela?
Zaghachi Carlos Frias
Ọ na-agwa m na enweghị ike ịwụnye ya enwere m ngwaahịa ROM 4.4.4
Ma ọ bụrụ na m tinye ya na ngwa-priv na-enye ha ikikere mgbe m bidoghari ọ na-agwa m na onye na-ebupụta Lenovo akwụsịla. 🙁
Andy Rubin's Android Essential smartphone na-agafe Geekbench